नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीचको यो एकताले बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रामा कस्तो मोड ल्याउला ? उनको यो पहलको अर्थ के हो ? उनी आफैँले यसलाई कसरी बुझेका छन् र जगत्ले कसरी बुझ्ला ? केही वर्ष उनी नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानमा लागे । अहिले वैकल्पिक राजनीति निर्माणको कुरा गरिरहेका छन् । आखिर केको खोजमा छन् बाबुराम ? यो वैचारिक पुनर्गठनको खोज हो कि शक्ति आर्जनको अविराम फ्यास ?
त्यसो भए तत्कालीन माओवादी पार्टीलाई नै समृद्धिको वाहक किन बनाएनन् त उनले ? उनको जवाफ थियो, ‘परम्परागत पार्टीहरू (तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेस) समृद्धिको रथ हाँक्न नसक्ने गरी जीर्ण भइसकेका छन् ।’ त्यसैले समृद्धिको रथ हाँक्न उनले नयाँ शक्ति बनाए । माओवादीमा विद्यमान आफ्नो गुट, तथाकथित विज्ञ, ब्युरोक्र्याट र सेलिब्रिटीहरूको एउटा मध्यमवर्गीय समूह जम्मा पारेर उनले कस्तो नयाँ शक्ति बनाउन खोजेका थिए ? अर्थात्, शक्तिको कुन स्रोतमा उनका आँखा परेका थिए ?
बाबुरामले देश ०४८ तिर फर्किरहेको बताए । एकदम सही बताए । उनी र उनको तत्कालीन पार्टीले यो संविधानमा नोट अफ डिसेन्टको फेहरिस्त लेखेको छ । मधेसी दलहरूले संविधानमै त लेखेनन्, तर जनआन्दोलनद्वारा आफ्नो विरोध दर्ज गरे । नोट अफ डिसेन्टको अर्थ हो, ती एक–एक बुँदामा संघर्ष जारी रहनेछ । नोट अफ डिसेन्ट औपचारिकताको लेखोट होइन, भविष्यमा जिउने संघर्षको मार्गचित्र हो । अनि कसरी राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्डा सकियो ? बाबुराम सरले बाँचिरहेको त्रासद द्विविधा यहीँनेर छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यकामा संस्थागत गरेको राज्यसत्ताको विरासत बदल्ने लडाइँ नै हालसम्मका सबै राजनीतिक संघर्षका सार हुन् । दशकपिच्छे नयाँ राजनीतिक आन्दोलन त्यसै जन्मिएको होइन । राज्य पुनर्संरचनाको कुरा केवल उत्पीडित समुदाय, जाति, क्षेत्र र लिंगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने मात्र थिएन र होइन । राज्यको चरित्र बदल्ने भनेको त्यसले नयाँ व्याकरण बनाउने हो । सुशासन र सदाचार त्यहीँबाट जन्मिन्छ । समृद्धि त्यहीँबाट आउँछ । विडम्बना ! बाबुराम भन्छन्, ‘हाम्रो एकता पृथ्वीनारायणको राष्ट्रिय एकतापछिको दोस्रो राष्ट्रिय एकता हो ।’
पृथ्वीनारायणले गरेको राष्ट्रिय एकता थियो भने अहिले अर्को एकता किन चाहियो ? उनले भौगोलिक एकता गरे भन्न सकिएला, तर राष्ट्रिय एकताको यही राजनीतिक भाष्यमा पुरानो सत्ताको विचार र संस्कृति निर्माण भएको होइन र ? बाबुराम सरका चोटपटक अनेक होलान्, जनयुद्धमै छँदा पार्टी (प्रचण्डले) ले कैद गरेको घटनादेखि नै गन्ती गर्न सकिएला । पृथ्वीनारायण भने उनको नयाँ राजनीतिक पहलमा एक खड्गो बन्ने निश्चित छ ।
पृथ्वीनारायणले राष्ट्रिय एकता गरेको दाबीबाटै महेन्द्रीय राष्ट्रवाद बनेको हो । त्यसैबाट ‘एक भाषा, एक भेष’ नीति बनेको हो । त्यसैले एउटा खास समुदायका पुरुषको सत्ताधारी अहंकार निर्माण गरेको हो । त्यसैले उत्पीडित समुदाय र क्षेत्र निर्माण गरको हो । त्यसैले मधेसीलाई विदेशी करार गर्ने मनोविज्ञान रचेको हो । बाबुराम र उपेन्द्र मिल्नासाथ पृथ्वीनारायणको भाष्य किन बौरिएर आउँछ ? यसले तुरुन्तै संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको संघर्षलाई खारेज गर्दैन ? अर्थात्, ०४८ तिर मुलुकलाई फर्काउने चेष्टाको अनुमोदन हुँदैन र ?
समृद्धिको कुरो यसैमा जोडिएर आउँछ । समृद्धि भनेको के हो ? कसका लागि समृद्धि ? समृद्धिको स्रोत जनता कि दलाल पुँजीपति र विदेशी सहायता ? समृद्धि एक प्रोजेक्ट कि जनताको जीवनबाट निःसृत हुने एक प्रवाह ? पञ्चायतकालीन विकासको अवधारणा बोकिहिँड्ने विज्ञ, विश्व बैंक र आईएमएफका सेमिनारबाट शिक्षित–दीक्षित ब्युरोक्र्याट आदिलाई बाबुरामले सबैभन्दा धेरै पत्याएको तथ्य यहाँ स्मरण गर्नैपर्छ । पृथ्वीनारायणले बनाएको राज्यमा महेन्द्रले रचेको विकासको भुलभुलैया अहिलेसम्म जीवित छ, समृद्ध छ । त्यसैले समृद्धि उनीहरूकै लागि हो, जसले राज्यको यो संरचनाबाट लाभ उठाइआएका छन् ।
बाबुराम सरको समृद्धिको अभ्यास हालसम्म यतैतिर छ । उनको राजनीतिक एजेन्डा र समृद्धिको विचार कहीँ–कतै मेल खाँदैन । त्यसैले नयाँ शक्तिको भविश्य उनले आफ्नै फेसभ्यालुमा रच्न खोजे, त्यो बनेन । अहिले वैकल्पिक राजनीति बनाउने कुरा छ । जनताको राजनीति र उत्पादकत्वमा अझै पनि ठूलो शक्ति निर्माण गर्ने ऊर्जा छ । त्यो ऊर्जा चिन्ने समृद्ध विचारप्रणाली हामीलाई चाहिएको छ । अनेक चोटपटकका बाबजुद त्यो विचारप्रणालीको खोज गर्ने उत्साह उनमा जीवित देखिन्छ । अहिलेलाई सुखद कुरा यही हो ।
साथमा यो पनि पढ्नुहोस :
→ ‘आज जे छु, भोलि हुन्नँ भनेर बुझ्नुपर्छ’
→ विशृंखल बाबुराम
नश्लीय, जातीय अहंकार कति सुसंस्कृत र मीठो भाषामा प्रकट गर्न जान्दछन्, मित्रहरू । उनीहरूको ...